Ireto misy toro-hevitra hanampiana anao hitehirizana sy hahandroana ny atody omena anao:
1. Ny fomba hanavahana atody ratsy sy tsara
Alatsaho ao anaty rano antsasaky ny vera ny atody. Raha mitsingevana eny ambony dia efa ratsy izy izay ary tsy azo hanina intsony. Raha milentika kosa dia mbola tsara ilay atody
2. Fomba tsotra hahafantarana ny atody masaka :
Mba hahafantarana fa masaka tsara ny atody nahandroina aman’akorany dia ahodino toy ireny tandrimo ireny amin’ny toerana mahitsy tsara ny atody avy nandrahoina. Raha mihodina tsara miankavia na miankavanana izy dia masaka izay. Raha mivadika amin’ny “axe” hafa kosa dia mbola manta izany.
3. Ny atody amin’akorany na “Oeuf dur”
Fahandroana azy: Mba tsy ahavaky ny akoran’ilay atody rehefa ahandroina anaty vilany dia raraho vinaigitra fotsy ny rano ampangotrahana azy. Ho hitanao fa ho mafy ny akorany ka tsy ho vaky intsony rehefa avadibadiky ny rano.
Famoasana azy: Raha maro be ny atody ho voasana dia alatsaho ao anaty vilany vy. Raha efa izay dia ajijio ilay vilany mba hahavaky ny akoran’ireo atody ao anatiny. Fenoy rano ilay vilany avy eo ary ho mora voasana ireo atody.
4. Fitehirizana atody
Raha ao anaty vata fampangatsiahana dia apetraho anat’ilay fitahirizana manokana iny mihitsy ny atody. Ataovy lavitry ny sakafo mahery fofona, mba ho vao foana.
Raha tsy misy fampangatsiahana kosa dia atao amin’ny toerana mangatsiatsiaka tsy tratry ny masoandro izy dia haharitra ela kokoa vao simba.
5. Fomba ampisarahana ny tamenak’atody sy ny tapotsiny
Vakio eo ambonin’ireny sotrobe makarakara (passoir) ireny ny atody. Ho hitanao fa hisaraka ho azy ny tamenany sy ny tapotsiny.
Crée le mercredi 05 septembre 2018 à 04:55:01
TANTELY sy ny vokatsoa entiny
Mahasalama ny tantely saingy ny fomba hihinanana azy sy ny vokatsoa entiny mazava angamba no mbola tsy hainao avokoa? Hoditra mana[. . .]
Aina Mirado Tsiferana Andriana